Vitsy amin` izy ireo anefa no mahalala ny tombotsoa misy eo anivon` ity sampandraharaha misahana ny fiahiana ara-tsosialy ity. Napetraka ny rafitra E-salariés, izay fomba fiasa manaraka ny teknolojia amin'ny fandoavan-ketra ataon' ny orinasa, mba hanamorana ny mpikambana hisitraka ny tombony izay eo anivon` ny CNaPS. Tsotra ho an`ny mpikambana ihany koa no mijery manao ny mombamomba ny mpampiasa iray sy ny mpiasa iray raha mihoatra ny filazan-karama sy fandrotsahana latsakem-boka ataony. Ankoatra izay dia tombotsoa goavana azo amin` ity E-salariés ity koa ho an` ny CNaPs sy ny foibem-pitantanana ankapobeny ny hetra (DGI) ny fahafahana miaraka mikirakira ny vaovao indray mandeha lasa fikirakirana vaovao tambatra raha toa ka samy manana ny azy ny tsirairay avy teo aloha. Araka izany, raha teo aloha ny mpampiasa manao filazan-karama mitokana sy filazan-ketra mitokana, ankehitriny dia afaka miaraka ato izany amin` ny alalan` ity rafitra vaovao ity. Hanafoanana tsikelikely ny fikirakirana taratasy sy hidirana amin` ny teknolojia vaovao no tanjona amin` izany. Omaly no notanterahina teny Antaninarenina ny fanasoniavana ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin'ny CNaPS sy ny foibem-pitantanana ankapobeny ny hetra (DGI) ary ny PAPSP amin'ny fametrahana ny Rafitra E-salariés.